Burburka taariikhda Yaman oo laga digay - BBC Somali
Burburka taariikhda Yaman oo laga digay
Image caption Magaalooyiinka qaar ee Yaman ayaa ku dhow inay baaba'aan
Hay’adda dhaqanka ee Qaramada midoobeey ayaa ka digtay halista haysato koobta taariikhiga ah ee Yaman, e ka dhalan karta qalalaasaha dalkaasi.
Arrintan ayaa imaaneysa saacado kaddib markii ay bilaabatay xabad joojinta shanta maalin ah ee loogu talagalay howlaha gurmadka . Bafatiraha arrimaha carabta ee BBC-da Sebastian Usher ayaa ka warramaya.
Ku dhowaad 7 isbuuc, isbeheysiga uu Sacuudiga hogaaminayo waxa ay ololle ballaaran ku duqeynayaan mucaaradka Xuutiyiinta ah.
Xarumaha militariga ee mucaaradka ayaa bartilmaameedka uu yahay, laakiin waxaan shaki kujirin inay dhibaato gaartay dad rayid ah iyo burburka dhismayaasha dalka.
Waxaa sidoo kale halis ku jirta dhismayaasha iyo naqshadaha taariikhiga ee u gaarka ah Yaman.
Dhismayaasha qurxoon ee midabada kala duwan leh, ee lagu qurxiyay rinjiga cad ee Carabta iyo daaqadaha midabada leh eek u yaalla bartamaha magaalada Sanca, iyo magaalada kale ee Waqooyiga ku taalla ee Sacdaa ee ay ku xoog badan yihiin xuutiyiinta, ayaa hay’adda sheegeysaa inay ku dhow yihiin in la burburiyo.
UNESCO waxa ay sheegeysaa in la soo gaarsiiyay warar naxdin leh eek u saabsan dhaawaca daran ee loo geystay dhismayaashaasi, taas oo ay ku sheegtay inay tahay baabi’inta Farshaxan kaloo dunida Carabta ah.